Smelov - tsy misy lanjany intsony
Ny antony lehibe indrindra mahatonga ny lanjany mihoatra noho ny lanjany. Ary ny habetsahan'ny sakafo atokana ho an'ny olona amin'izao fotoana izao, ny hihinanany bebe kokoa rahampitso, tk. ny vavony dia mihazona tsy tapaka. Mba hampitsaharana ny faribolan'ny herim-po amin'ny herin'ny hery - mila mila hery sy fiaretana goavambe ianao. Soa ihany ho an'ny maro, misy fomba iray ahafahana mamono an'i Dr. Smelov, izay natao hanasitranana olona iray avy amin'ny fahazarana miserasera.
Fitsipika momba ny fatiantoka mavesatra nataon'ny metaly Sergei Smelov
Ny fomba famoahana ny lanjany Sergei Smelov ankatoavin'ny Minisitry ny Fahasalamana. Ny fampandrosoana an'i Dr. Smelov no miorina amin'ny tsindrim-pihetseham-po. Ny fitsaboana ny marary dia tanterahina ao amin'ny toeram-pitsaboana, eo ambany fanaraha-mason'ireo mpitsabo manana traikefa, dia tsy azo atao ny mandany lanjan'ity fomba ity fotsiny.
Ny fatiantoka dia manomboka amin'ny fomba fitsaboana an'i Smelov amin'ny fitsidihana toeram-pitsaboana sy fifampiresahana amin'ny manam-pahaizana manokana. Ny dokotera dia mamantatra ny antony manosika ny fahaverezany ary mamaritra ny halehiben'ny fahaverezan'ny lanjany, satria matetika ireo tovovavy tonga any amin'ny toeram-pitsaboana, izay tsy manana lanjany be loatra.
Ny fatiantoka mavesatra ao amin'ny tobim-pitsaboana Sergei Smelov dia misy aretina ara-tsaina, anisan'izany ny anorexia, diabeta, epilepsy, alkaola, kansera, bevohoka ary mandritra ny fampinono.
Raha mila marary mafy ny marary iray dia heverina ny fomba fitsaboana lehibe indrindra - fitsaboana hypnosis natao hanakanana ny faniriana be loatra. Aorian'ny fihinanan-dronono dia manomboka mihinana ny olona iray, manatsara ny fahazarana mihinana azy, tsy misy faniriana ny hikorontana ny alahelonao ary handefa ny vata fampangatsiahana amin'ny alina. Rehefa nandeha ny fotoana dia mihena ny habetsaky ny vavony ary mihena ny lanjany (hatramin'ny 18 kg mandritra ny 6 volana).
Ny fomba fiasan'ny dokotera Dr. Smelov, toy ny fomba maro hafa amin'ny fahavoazana mavesatra, dia manana mpanohana sy mpanohitra azy. Na izany aza, raha toa ka tsy azo atao amin'ny fomba hafa ny fahaverezan'ny lanja (fanatanjahan-tena, ny fihinanana) noho ny olana ara-pahasalamana, ny fampiasana ny hypnose dia azo antoka tanteraka, satria noho ireo fotoam-pivoriana, dia tsy hiverina hiady irery ihany ny olona, ​​fa koa fahasalamana.
Ny sakafo hariva mandritra ny 7 andro
Diabeta miaraka amin'ny atrôasia
Fanadiovana sakafo mandritra ny 7 andro
Vetivety dia very 5 kg?
Ny sakafo mora ho an'ny fahazoana haingana
Dokotera Bormental - Diet
Salady miaraka amin'ny akoho sy fofona
Misy onjam-peo ve?
Manicure amin'ny ratra - 30 sary avy amin'ny hevitra tsara momba ny manika tsara tarehy
Fanafody ho an'ny vitsika ao amin'ny zaridaina
Cetrin - voka-bary
Jiromena avy amin'ny chiffon 2014
Vetivety dia hiverina amin'ny vadiny ve ny fianakaviana amin'ny vavaka?
Trout - kalôria votoatiny
Lagman dia an-trano
Voankazo - voankazo kaloria
Fampiharana amin'ny taratasy miloko
Podisynoviki - fanatsarana sakafo